बर्डफ्लुः किन हामी लापरवाही गर्दैछौ रु ? – खोज खुलासा
Home > Pages > जीवन शैली > बर्डफ्लुः किन हामी लापरवाही गर्दैछौ रु ?
खोज खुलासा ११ बैशाख २०७६, बुधबार १०:०० जीवन शैली, स्वास्थ्यLeaveacomment
केही समययता लगातार जस्तो छाइरहेका समाचारका हेडलाइन हुन् यी । ‘बर्डफ्लु’ हाम्रो लागि नौलो शब्दावली होइन । यसले केही बर्षअघि नै समाजलाई थर्कमान बनाइसकेको छ । तर, विगतमा बर्डफ्लुले जनमानसमा जुन आतंक मच्यायो, अहिले त्यस्तो देखिदैन । धमाधम बर्डफ्लु भेटिएको र काग समेत मरेको खबर आइरहँदा पनि यसतर्फ सर्वधारणको ध्यान त्यती तानिएको पाइदैन ।
के त्यसो भए अब ‘बर्डफ्लु’बाट हामीले डराउनुपर्ने अवस्था छैन रु के यसले हामीलाई अब कुनै किसिमको हानी गर्नेवाला छैन रु
बर्डफ्लु के हो रु
बर्डफ्लु नामबाटै भेउ पाउन सकिन्छ कि, यो चराहरुमा हुने संक्रमण हो । कुखुरा एवं पंक्षीहरुको संक्रमित रोग हो यो । बर्डफ्लु एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको छोटकरी रुप हो ।
तर, यो संक्रमण चराहरुमा मात्र सीमित रहँदैन । मान्छेमा समेत फैलन सक्छ । कुखुराको मासु, प्वाँख, सिंगान, र्‍याल, दाना, अन्डा, अन्डा राख्ने क्रेट आदिबाट सर्न सक्छ ।
बर्डफ्लु यस्तो संक्रमण हो, जसले मृत्यु समेत हुनसक्छ । खासगरी बर्डफ्लु एच फाइभ एन वान नामक सूक्ष्म भाइरसको संक्रमण प्राणघातक हुन्छ । अति नै छिटो सर्ने यस्तो भाइरस १ सय ४४ प्रकारका हुन्छन् ।
१० करोडको मृत्यु
कुनैबेला बर्डफ्लुले ५ देखि १० करोड व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । मानव स्वास्थ्यकै लागि यो एक खतराको घण्टी थियो ।
सन् १९१८र१९१९ मा फैलिएको यस इन्फ्लुएन्जाबाट करोडौंको ज्यान गएको थियो । त्यसबेला यसलाई स्पेनिश फ्लु भनिन्थ्यो । पछि एशियाई फ्लुको नामकरण गरियो । सन् १९६८ मा यही संक्रमणलाई हङकङ फ्लुको नामले चिनियो, जसले दश लाख जनाको ज्यान लियो ।
कति घातक रु
कुखुरा वा चराचुरुंगीबाट फैलने यसको भाइरसले मान्छेलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ । यसरी मान्छेमा यसको संक्रमण फैलिएमा त्यो निकै घातक हुनसक्छ ।
खासगरी एच फाइभ, एन वान नामकरण गरिएको भाइरस निकै खतरनाक हुन्छ । यसको जटिलता के हुन्छ भने, यो निकै तिब्र गतिमा फैलिने संक्रमण हो । बर्डफ्लु बिरुद्धको उपचर एवं खोप अहिलेसम्म विकास नभएकाले पनि यसलाई निकै जटिल रोग मान्ने गरिन्छ । त्यसैले रोग लाग्नुअघि नै आवश्यक सर्तकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यत्तिका खतरनाक हुँदा हुँदै पनि अहिले हामीकहाँ बर्डफ्लुप्रति त्यती धेरै सर्तकता अपनाएको भने पाइदैन ।
कसरी अपनाउने सतर्कता रु
हामीकहाँ व्यवसायिक रुपले कुखुरा पालन गरिन्छ । त्यहीबाट यो रोगको संक्रमण फैलने सबैभन्दा बढी भय हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुखुराको सम्पर्कमा रहने व्यक्तिले निकै सर्तकता अपनाउनु पर्छ ।
उनीहरुले संक्रमित कुखुरा, दिसा, अन्डा, रगत, दाना, केहीपनि छुन हुँदैन ।
त्यसो त कुखुराको रेखदेख गर्नेले मात्र होइन, यसको उपभोग गर्नेले पनि सर्तक रहनुपर्छ । संभव भएसम्म त कुखुरा वा यसको अन्डा नखाएकै वेश । यदि खानै परेमा पनि राम्ररी पकाएर मात्र खानुपर्छ । ७० डिग्री भन्दा माथिको तापमानमा पकाएपछि बर्डफ्लुको भाइरस मर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
१। संक्रमित कुखुराको सम्पर्कमा नजाने ।
२। राम्ररी हातधुने । संक्रमित कुखुराको सम्पर्कमा गएपछि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ ।
३। कुखुराको मासु सकेसम्म नखाएकै राम्रो । खानु परेमा पनि राम्ररी पकाएर खानुपर्छ । अर्थात धेरैबेर उच्च तापमानमा पकाएर खानुपर्छ ।
४। पोल्ट्रीर्फममा गएको बेला माक्स लगाउनैपर्छ ।
५। आसपासमा चराहरु मरेको भेटिएमा बर्डफ्लुको कारण हुनसक्छ । त्यसैले सर्तक हुनुपर्छ ।
दीर्घ रोगीहरुको औषधी नगरपालिकाले ल्याइदिने – मेयर बरबरिया
खोज खुलासा १३ बैशाख २०७७, शनिबार १९:००
भारतमा थप ४३ हजारमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
कोरोनाविरुद्धको १० लाख मात्रा भेरोसेल खोप आउदै
खोज खुलासा १० श्रावण २०७८, आईतवार १३:००
कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएको धेरै समयपछि पनि दोस्रो खोप लगाउन सकिने
खोज खुलासा ३१ श्रावण २०७८, आईतवार १४:००